Toamasina: nakatona ny orinasa MPO | NewsMada
Toamasina: nakatona ny orinasa MPO
Orinasa nikasa hamokatra menaka fihinana sy daba plastika ny Madagasikara Premium Oil (MPO), miorina eny Antananadava Toamasina II. Nahazo alalana tamin’ny fanjakana, laharana 2491/2019, ny 23 janoary 2019, avy amin’ny minisiteran’ny Indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina (MIDSP) ary nohamafisin’ny didim-pitondrana lah-5098/2019/ MAHTP/ SG/ DGATH, ny 21 marsa 2019, avy amin’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany. Nahazo fankatoavana avy amin’ny Ofisim-pirenena misahana ny tontolo iainana (ONE) ihany koa ity orinasa ity, araka ny taratasy lah-03/19-MEEF/ONE/DG/PE, ny 25 janoary 2019.
Miisa 600 ny mpiasa miasa ao amin’ny MPO, ary efa vita hatrany amin’ny 80% ny fotodrafitrasa amina velaran-tany maherin’ny 7 ha. Marihina fa efa nisokatra tamin’ny taona 2016 ity orinasa ity, saingy nakaton’ny fitondrana tamin’izany fotoana izany, ary niverina nisokatra ny janoary 2019, araka ny voalaza etsy ambony. Ankehitriny, taitra ny mpiasa sy ny mpampiasa ary ny rehetra satria nakatona indray ity orinasa ity, araka ny didim-pitondrana lah-16-088/ 2019, navoakan’ny minisiteran’ny Indostria, ny 5 aogositra teo.
Hampihemotra ny mpampiasa vola hafa
Tsy nisy ny fanazavana avy any amin’ny minisiteran’ny Indostria ny antony nanakatonana ity orinasa ity. Etsy ankilany, nilaza ny tale jeneralin’ny MPO, i Chan Mamod, fa mahatratra 6 tapitrisa dolara ny fampiasam-bolany nindramina tamin’ny Banky iraisam-pirenena. Mahatonga ny mpampiasa vola vahiny (IDE) hafa hihemotra na tsy ho avy eto Madagasikara ny toy izao. Manampy izany, “vonona izahay hanarina izay tsy mety raha sendra misy izany fa tsy tokony hovonoina toy izao ny vahiny mpandraharaha”, hoy ihany izy.
Tsiahivina fa efa nitokona ireo mpiasa miisa 600 tato anatin’ny dimy andro.